Home » Food, Drink & Recipes » Food Safety နိဒါန်း
ကျုပ်တစ်ယောက်များဗျာ အစားအစာ သိပ်မက်တာ၊ မက်ဆို ငတ်ခဲ့တာကိုး။ ကျုပ်မသိခင်တုန်းက ပိန္နဲသီးဟင်းချက်ကို တောဝက်သားဆိုပြီး စားခဲ့ရဖူးတယ်။ မြင်းခွာရွက်တွေနှုတ်ပြီး သုတ်စားခဲ့ရတာလဲ အခါခါ။ ဆီနှစ်ကျပ်ခွဲသား၊ အချိုမှုန့် ၅ိ/- တန်တစ်ထုပ်၊ ဆား တစ်ကျပ်တန်တစ်ထုပ်ကို အိမ်က ဒန်အိုးအကောင်းလေးကို တူနဲ့ ထုပြီး လဲစားခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ဂုဏ်မငယ်ပါဘူး။ ပြောရရင် အရာရှိသားသမီးဖြစ်ခဲ့တော့ ပုဆိုးအပေါက် ဖာတစ်ရာထပ်နေတာနဲ့ ကားခေါင်းခန်းမှာ ထိုင်ပြီး ကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးတာကိုးဗျ။
ကျုပ်တစ်ယောက် အိမ်က အမေ ဘယ်လိုချက်ချက်၊ ဗိုက်ဆာတာနဲ့ စားရတော့ သိပ်စားကောင်းသဗျ။ နောက်တော့ အရွယ်လေးရောက်လာတော့ လမ်းဘေးတွေ့ကရာဆိုင်တစ်ခုခုမှာ ၀င်စားလိုက်တာပဲ။ မြောင်းဘေးမှာ ဖွင့်တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ တိုက်နံရံမှာ ကပ်ဖွင့်တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ အဖီလေးဆွဲပြီး လူသွားစင်္ကြန်ပေါ်မှာ ဖွင့်တာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ စားလိုက်တာပဲ။ ဘာပြောကောင်းမလဲ ဘယ်နေရာစားစား စားကောင်းတာချည်းပဲ။ ကိုယ့်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ထဲက ပန်းကန်ထဲကဟာ ကောက်မော့ချင်မော့၊ စားချင်စား၊ အရသာတယ်ရှိသဗျား။
ဂလိုနဲ့ ၃ နှစ်ကုန်ဆုံးလေသည်ပေါ့။
အောင်မြင်စွာနဲ့ပဲ ဆင့်ကာပူရက ဆုတ်ခွာလာပြီးတဲ့နောက် ကျုပ်တစ်ယောက် တစ်ခါ စားဖူးခဲ့တဲ့ KFC က အလုပ်ခေါ်တော့ ၀မ်းသာအားရ လျှောက်သဗျား။
ဖွင့်မယ်လို့ ကြားခါကစတော့ ဈေးသိပ်များမယ်ထင်မိတယ် ။
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ ဟန် ဆိုတာကိုးးး ဆိုဗျ။
ဖတ်တော့ ဖတ်သွားပါပြီ ကိုရင်ရှုံးရေ။
.ကောင်းပါတယ်..ခုကာလမှာ ကိုရင်ပြောတဲ့ Food Safety ကအရေးကြီးလာသဗျ
ကျောက်စ်တို့ငယ်ငယ်က ထောက်လှမ်းရေးတင်ဦးရဲ့ ပျားဂေဟာစီမံကိန်းနဲ့…
ကြက်ကြော်က သနပ်ခါးလိမ်းထားသလိုပဲ … အားဟိ
သူ့သားတော်မောင် သစ်ခွဆရာကြီးအကြောင်းတောင် မနေ့တနေ့ကပဲ စကားစပ်မိသေး..။
နော်လည်း မှက်မိဒဲ… ကန်ဒေါ်ဂျီးဇောင်းက စိုက်ပျိုးရေးခြံမှာလဲ ပျားဂေဟာစိုပီး ကြက်၊ ငုံး ကြော်ရောင်းတယ်ထင်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကွာလတီကျပီး ငုံး၊ကြက်ကြော်တွေ ပိန်လှီလာလိုက်တာ နောက်ဆုံး ပျောက်သွားပါရေ။ ဘာလို့ မရောင်းတော့ တာလဲလို့ အဲဒုံးက လူဂျီးတွေကို မေးဖူးတယ်။ ကြောက်လို့ထင်ပါရဲ့ ဘာမှ ရေရေရာရာ မပြောပြဘူး။ သွားလေသူ ထောက်မှူးချုပ်ဟောင်း မျက်မှန်ဂျီးရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးစာဆိုတာ အင်တာနက်မှာ သူ့သမီးတင်တာ ဖတ်ဖူးတယ်။ အဲဒမှာ ပျားဂေဟာတည်ထောင်ဘုံ၊ ကြက်မွေးမြူ ရေးလှုပ်ပုံ ရေးထားတယ်။ အဲဒီ ပျားဂေဟာစီမံဂိန်းနဲ့ လူတွေထောက်ခံလာလို့ သူလဲပြုတ်ရော ထောက်လှမ်းရေးကွန်ရက်နဲ့ ပျားဂေဟာပါ မာလကီးယားသွားတယ်လို့ သိဒါပဲ။
သများလဲ Food Hygine သင်တန်းဖွင့်ဖို့ကြိုးသားနေတာ စားသောက်ဆိုင်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပေါ့။ အပိုတွေလို့ထင်ပုံရဘူမှစိတ်မွင်ဇား
ပြောချင်တာက အဆင့်အတန်း နိမ့်တယ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်လို တစ်ဖက်ပိတ်ကြီးနေနေတုန်းက ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ခုများတော့ နိုင်ငံတစ်ကာနဲ့ ဆက်ဆံလာရတော့ ကိုယ်လဲ စားသုံးသူ ရပိုင်ခွင့်တွေ သိထားဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။ လေးပေါက်ပြောသလို ဘုန်းကနဲ လဲမသေရင် ပြီးတာပဲဆိုနိုင်ပေမယ့် သူက အတွင်းကို လှိုက်စားတတ်တဲ့ သဘောသဘာဝရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး စားကြတယ်ဗျာ။ ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ပဲ ခံရမှာလေ၊ အဲ့ဒီမှာ ဘယ်သူက တာဝန်ခံမလဲ? အစိုးရလား? ရောင်းချသူလား? စားသုံးသူလား? အဲ့လိုတွေ ရှိတယ်လေ။ ကိုယ်က ၀ယ်လဲစားရသေးတယ်၊ ကိုယ့်ဖာသာလဲ တာဝန်ယူရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးနော။ အခြေအနေတွေက မှားနေတယ်။ အဲ့ဒါလေး ပြောချင်တာ။
ကိုရှုံး ရဲ့ ပိုစ်ကို တကယ်သဘောကျပါတယ်
ကျုပ်တို့ လောက စကားနဲ့ ပြောရရင် QCD ပေါ့ဗျာ
ကိုရှုံး ရဲ့ ရသလဲ ပါ၊ ဗဟုသုတလဲ မြောက် တဲ့ စာတွေ မဖတ်ရတာကြာ ပေါ့။
ရာသီစာလို ခုချိန်မှာ KFC ကို မိတ်ဆွေတွေကို လက်ဆောင်ပေးတာ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် ဖြစ်နေတယ်။
ခုလိုသိခွင့်ရတာတော့ ကိုရှုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဟင်းချိုမှုန့်မပါတဲ့အစားအစာဆို food fasety ဖြစ်ပါတယ်တဲ့
အသီး အရွက် တွေ စိုက်ချိန်မှာ ဆေးတွေသုးံ ပြီး စိုက်နေကြသလို အသီးတွေဆိုရင်လည်း တချို့ က မြန်မြန်မှည့် ချင်တာ အရောင် တက်ချင်တာတွေကြောင့် ဆေးတို့ကြပြန်တယ်။ ကိုယ်ခံ အားမကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာဒါမျိုးတွေ စားမိရင် ဝမ်းမကောင်းသလိုလို မအီမသာခံစားရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ နိဒါန်း ဆိုတော့ အစပဲရှိသေးတယ်။ ဆက်ရေးပေးပါဦး။